Yiyiphi i-Ballstriker enhle eGoli?
I-ballstriker enhle kwigalufu i-golfer eguquka ngokugcwele-ukukhwaza ngamaplanga, i-hybrids, kunye ne-irons-kubangela ukuba uqhagamshelwano oluqinileyo oluphindaphindiweyo ngokuphindaphindiweyo. I-golfer ene-ultra-consisting in position-impact - xa wenza udibaniso olukhulu - ngumdlali omdala webhola.
Bonke abaGoli beBallstrikers ...
... kodwa abanye bethu bangcono kunabanye. Xa uva abavakalisi bamabonwakude bebiza umnqweno we-tour "ibhola elikhulu," kuthetha ukuba i-golfer ayifuni ukudibanisa nesithende okanye inzwane ye- clubface , ayifumaneki i- fat or thin .
Bafaka ibhola kwibhola kwindawo efanayo kwi-clubface emva kwexesha.
UGary Adams, uyise wokhuni lwesinyithi, wachaza ibali malunga nokuzama ukuthengisa ukuvakasha kwezohambo kwiinguqulelo zangaphambili zomqhubi wensimbi. Ufumene uJohnny Miller kwibala lokuhamba kwaye wamxelela ukuba umqhubi wensimbi unokuncedisa ukunciphisa imiphumo emibi yeyiphi na into ephazamisayo. UMiller waphendula ngokuphakamisa i-club yakhe yegalufu kwaye ebhekise kwindawo ephakamileyo yokugqoka ebusweni-indawo encinci apho wadibanisa khona.
Ukuba ngumdlali obala kakuhle kubonisa ukuba amandla e-golfer "asebenze ibhola" - ukwenza ibhola ihambe ngqo okanye ikhohlo, okanye ibaleke, ibhola phezulu okanye iphantsi.
Ngaphezu kwayo nayiphi na into, "ibhola elihle" lithetha ukuba i-golfer ikhupha ngokuphindaphindiweyo ukhuni kunye neentsimbi, uzama ukushaya, ngokuchaneka. Ukubeka ibhola apho ufuna ukuba ihambe khona, ngokuphindaphindiweyo: oku kuluhlu olukhulu lwebhola.
Kodwa Ukuba iBallstriker Enhle Akuqinisekisi Ukuphumelela
Ukuba ngumdlali ophezulu akuthethi ukuba uyitshitshise ngokuthe rhoqo , ngokuphindaphindiweyo kuninzi lwaontanga bakho - ngokwaneleyo ukuze baqaphele.
Akukho golfer eye wayiguqa ngokuthe rhoqo . Ngona abadlali bezona zibalaseleyo kakhulu - uBen Hogan , uLee Trevino , uNick Price , uMiller, uJoyce Wethered kunye noTiger Woods ngokubaluleka kwakhe, kuthiwa bambalwa nje - baxhatshazwa.
Njengoko uHogan wambi wathi, "Lo ngumdlalo wokulahleka. Umntu olahlekelwa kakuhle nguye uya kuphumelela." Abo bahamba ngegolfu babiza abadlali bebhola bebhola bentle balahlekelwa ubuncinci.
Ukuba ngumdlali obalaseleyo akuqinisekisi ukuba uphumelele amanqaku. Ukuba unomdlalo omncinci omncinci, unenkxalabo kungakhathaliseki ukuba unjani i-ballstriker.
Ngokufanayo, unokuba ngumdlali ongezantsi, okanye unobungozi obunzima bebhola, kwaye unamanqaku amakhulu ukuba umdlalo wakho omfutshane kunye nokubeka izinto ezimnandi.
Kwaye ezinye iigrafu zegalufu zazixhomekeke kumntu ongenamdla. Ngokomzekelo, uWalter Hagen . Kanye, emva kokuchotshozwa nguHagen emdlalweni ongama-72, uBobby Jones uthe ngoHaig ohamba ngokusendle: "Xa umntu elahleka umqhubi wakhe, aze alahleke umqhubi wakhe wesibini, aze aphumelele umgodi nge- birdie , ufumana yam ibhokhwe. " UHagen wayengumdlali omncinci kumdlalo omncinci onokuthi ahambe kunye nomdlalo wakhe omde.
UMo Norman wayengumdlali webhola ophethe umgca wezemidlalo, owathi, ngenxa yomdlalo omncinci omncinci kunye nama-personal quirks, akazange aphumelele kwiPGA Tour .
I-Ballstriker vs. Ballstriking
"I-Ballstriker" kunye ne " ballstriking " ibhekisela kwinto enye, kodwa "ukubetha ibhola" libizwa negama lenkcazo egcinwe kwi-PGA Tour. Loo miselo udibaniso lwabadlali be-PGA Tour yokuqhuba umqhubi kunye nemifino kwimimiselo.
Ukuchonga okunye : Le mibini inokuthi iphelelwe ngamagama amabini kunokuba omnye - "umdlali webhola" kunye ne "ibhola ebethayo." Siphinde sibone imiqathango ecatshulwayo.
Funda iMimiselo yeMigudu yeOlimpiki
Ngubani owafaka ii-Skateboards?
Andiyithandi Yakho Kodwa Yakho Yenzeke
Amacandelo okuFunda abasebenzisanayo
'Imoya eWillows' Imibuzo yeSifundo kunye neeNgxoxo
Ukuba Unokukhetha Indlela eyahlukeneyo ebomini, Yintoni oya kukhetha?